Iyo Creepiest Urban Legend mune Imwe yeaya makumi mashanu States Chikamu 50
musha Horror Varaidzo Nhau Iyo Creepiest Urban Legend mune Imwe yeaya makumi mashanu States Chikamu 50
by Waylon Jordan January 18, 2021
by Waylon Jordan January 18, 2021 3,783 maonero
Tanyatsosvika kumagumo erwendo rwedu rweguta rwendo kuburikidza neUS?! Ndinofungidzira tine. Zvinotoda kuoma kuzvitenda, asi pano tiri nematunhu ekupedzisira mashanu mune yedu inotyisa travelogue uye ndinovimba iwe wakanakidzwa nekuaverenga zvakanyanya zvandainyorera nezvawo.
Zvino, nekuda kwekuti chiri chitsauko chekupedzisira parwendo urwu, usarase tariro! Aya mashanu ekupedzisira akangoita sekutanga, uye isu patinenge tisiri kumatunhu, hauzomboziva kwatingazotevera!
Ndeipi nyaya yaunofarira yemadhorobha yenguva dzese? Regai tizive mune zvakataurwa!
Virginia: Iyo Bunnyman
Mufananidzo kuburikidza Flickr
Ndakamirira nguva yakareba kuti ndisvike kuVirginia kuti ndigone kutaura nezvaBunnyman. Nyaya yacho inondifadza chose. Iyo ichokwadi ngano yeguta, yakazvarwa kubva kuzviitiko zviviri muna 1970, iyo yakatora hupenyu hwayo yega uye yakafuridzira vanyori venhau, vagadziri vemafirimu, maartist, uye vaimbi zvakafanana.
Apa ndipo pakatangira muBurke, Virginia:
Musi waGumiguru 19, 1970, Cadet weAir Force Force Robert Bennett nemukomana wake vaive vagere mumotokari yakamira apo murume aive akapfeka sutu chena yebhanzi akauya achimhanya achibuda mumiti aine hoko achipopotera vaviri ava, "Uri wega pfuma uye ndine nhamba yenyu yamategi! ”
Rume rakaenderera mberi nekukanda huni mumotokari, iyo yakapwanya nepahwindo ndokumhara mubhodhi repasi apo Bennett aitsvaga kuti aende. Murume akaridza mhere apo ivo vachitiza vasati vasvetuka kudzokera musango.
Mazuva gumi gare gare muna Gumiguru 29, Paul Phillips, gadhi wekuvaka, akawana murume akapfeka sutu yegrey, nhema, uye chena. Phillips akatarisa zvirinani kune anorwisa, achimurondedzera kunge makore angangoita makumi maviri ekuberekwa, 20'5 ″ uye zvishoma chubby. Rume rakatanga kusheedzera demo padanda revaranda richishevedzera kuti, "Uri kudarika. Kana ukaswedera pedyo, ndichakutema musoro wako. ”
Mapurisa eFairfax County akavhura kuferefetwa kwezviitiko izvi, zvese zviri zviviri zvakazopedzisira zvavharwa nekuda kwekushaya humbowo.
Izvo zvaingokwana kumutsa fungidziro yevagari vemo, zvakadaro.
Izvo zvakazoitika zvinotevera ingano yeguta. Pasina nguva nyaya dzakatanga kukura pamusoro peiye asinganzwisisike Bunnyman uye kwaakabva pamwe nezvinangwa zvake.
Imwe yenyaya dzakadai inodzokera kumashure munguva kuna 1904 apo vaviri vakapukunyuka varwere vekupotera vakatizira musango padyo nenzvimbo. Pasina chinguva vanhu vemunharaunda vaive vava kuwana zvitunha zvine tsuro, zvakadyiwa hafu. Pakupedzisira, mumwe wavo akawanikwa akarembera kubva kuFairfax Station Bridge aine mbichana, hanzu dzakagadzirwa nemaoko muheti uye nezviremera vakafunga kuti zviitiko zvisinganzwisisike zvapera. Zvisinei, pakawanikwa zvitunha zvakawanda zvetsuro, zvakabva zvave pachena kuti mumwe akapunyuka aive achiri akasununguka.
Zvino, ivo vanodaro, iye Bunnyman achiri kushungurudza nzvimbo iyi, achityisidzira vagari vemo uye nekurembedza vanhu vake kubva pabhiriji rimwechete panosvika Halloween. Ehezve, hapana humbowo hweizvi hwati hwawanikwa, asi izvo hazvitadzise vabereki kubva kuyambira vana vavo kuti vachenjerere paHalloween kuti varege kuwira muBunnyman.
Iyi ingori imwe vhezheni yenyaya dzakamera dzakakomberedza hunhu hwakaipa, uye zvinondinakidza kuti zvese zvinoita kunge zvakakura kubva pazviitiko zviviri muma1970 nemurume airatidzika kunge akatsamwiswa nekuvakwa kwenzvimbo dzemuguta remaguta. munharaunda.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveBunnyman, ini ndinokurudzira zvikuru chinyorwa chaJenny Cutler Lopez "Rarama kwenguva refu Bunnyman" kubva North Virginia Magazine kubva muna 2015. Iyo inovhara zviitiko zvekutanga asi zvakare inopinda munzira iyo lore yakura yakatenderedza iyo Bunnyman.
Washington: Anopenya Maziso muMineriner High Chikoro
Image kubudikidza yhiae ahmad kubva Pixabay
Mariner High Chikoro muEverett, Washington yakafanana nechimwe chikoro chesekondari munyika kunze kwechinhu chidiki chidiki. Nepo mamwe emarambi echikoro akasiyiwa aripo husiku hwese senge chero humwe, pane humwe husiku panenge pakati pehusiku, mwenje unodzima uchidzingira nzvimbo murima.
Kana izvi zvikaitika, vamwe vemunharaunda vanoti, unogona kuona maziso maviri anopenya achipenya kubva murima rechikoro. Uyezve, vanoti kana iwe ukatarisa kumeso kwenguva yakakwana, unozotanga kuona chimiro chemurume ane mapapiro mukati mechikoro.
Iyi ndeimwe isiriyo, yemasimba mascot? Munin'ina waMothman anopinda makirasi ehusiku? Hapana ane chokwadi, asi ivo vanoti iwe unogona kunzwa maziso achikutarisa usati wavaona, uye kuti zvinoita chete irwo rwechokwadi mhando yezvinotyisa zverondedzero iyi.
West Virginia: Vadzidzi Vasina Musoro weMonongalia County
Iyi ngano yeguta remuguta ndeimwe yakakwevera hupenyu kubva munjodzi inoshungurudza uye chaiyo yekuponda muna Ndira, 1970. Ma co-eds maviri, Mared Malerik na Karen Ferrell, vaiyedza kukwira kukwira mushure mekusiya mabhaisikopo manheru iwayo aNdira. Ivo havana kuzomboonekwa zvakare kudzamara miviri yavo yakagurwa musoro yawanikwa musango mwedzi yakazotevera.
Vagari vemo vakatyisidzirwa nemhosva iyi, uye mushure memakore mashanu haina kugadziriswa kusvikira murume anonzi Eugene Clawson areurura kuumhondi. Hechino chinhu, zvakadaro. Nepo Clawson pasina mubvunzo aive munhu akaipa - akabatwa nemhosva yekubata chibharo musikana ane makore gumi nemana- vanhu vazhinji havana kufunga kuti aive nemhosva yekuuraya kwevakadzi vaviri vadiki vari kutaurwa.
Nyaya iyi yanga iri nyaya yemapodcast, kuferefetwa uye mabhuku kubvira pakasungwa naClawson nekutongwa, uye hapana kana munhu anofunga kuti akapara mhosva iyi.
Saka ndiani akadaro? Kune wese muongorori, pane mumwe munhu anofungidzirwa, uye zvakaoma chaizvo kutaura.
Zvatinoziva ndezvokuti kubva panguva iyoyo, runyerekupe uye mishumo yekuona kwevakadzi vaviri vasina misoro zvakakwenenzvera padhuze nemugwagwa uko Mared naKaren vakapedzisira kuoneswa. Muchokwadi, inopfuura imwe chete tsaona yemotokari yakapihwa mhosva pakuonekwa kunokanganisa vatyairi.
Iyi midzimu iri kuraramisa nguva yavo yekupedzisira kana ngano yemumaguta inotakurwa nenjodzi kuyambira vechidiki nezve njodzi dzekukwira?
Wisconsin: Iyo Phantom yeRidgeway aka Iyo Ridgeway Ghost
Image kubudikidza lea tariro bonzer kubva Pixabay
Mugwagwa wakasurukirwa uri padyo neDodgeville, Wisconsin iri pamba pehunhu hunotyisa hunofungidzirwa kuti mweya wakasanganiswa wehama mbiri dzakafira mubhawa kupokana muma1840.
Kubva panguva iyoyo, zvinofungidzirwa mumatanho emakore makumi mana, iyo phantom inodzoka. Chii chinonyanya kukanganisa nezvenyaya iyi yemumaguta, zvisinei, ndicho chimiro-chinoshandura chinhu chemweya. Panguva dzakasiyana siyana, iyo Ridgeway Ghost yakaonekwa semhuka dzakaita sembwa nenguruve pamwe nekutora chimiro chevarume nevakadzi uye kunyangwe mabhora makuru emoto. Mushumo mumwe chete wakasanganisira akatasva bhiza asina musoro.
Vamwe veko vanoshevedza kuona kwemafaro basa reva pranksters, asi avo vakasangana nezviitiko zvekutanga-ruoko vanokuudza neimwe nzira.
Wyoming: Chikepe cheRufu paNorth Platte Rwizi
Image kubudikidza enzol kubva Pixabay
Ndiri mucherechedzi we ngarava yakanaka nyaya…
Kubva kuma1860s, chisingazivikanwe phantom ngarava yakataurwa ichitevedza North North Platte Rwizi muWyoming. Inoonekwa mubhangi remhute pakati pezuva – apo zvinhu zvakadaro hazviwanzovapo - uye zvinobva pamumvuri, zvakafukidzwa nechando nevashandi vechipoko pamadheki ayo.
Chinotyisa zvikuru pamusoro peichi chikepe ndechekuti inonzi inongoonekwa munhu asati afa. Zvakare, ivo vanoti iwe unonyatsoona kuoneka kwemunhu akafanirwa kufira pamusoro pechikepe, chakafukidzwa nechando-sevamwe vevashandi.
Kune dzakawanda nyaya nezve Ship of Rufu, asi ini ndinongogovana iyi yakanyorwa pane Chete Mune Nyika Yako:
Makore anodarika zana apfuura, mubati anonzi Leon Webber akataura nezvekusangana kwake nechikepe chakakura. Pakutanga, zvese zvaakaona raive bhora hombe remhute. Akamhanyira kumucheto kwerwizi kuti anyatso tarisa uye akatokanda dombo pamasaisai anotenderera. Yakabva yatora chimiro chechikepe, chiri mast uye maseiri akafukidzwa nesirivheri, kupenya kwechando.
Webber aigona kuona vafambisi vengarava vakati wandei, vakafukidzwawo nechando, vakaunganira chakakomberedza chimwe chinhu chakange chiri pamusoro pechikepe. Pavakaenda kure vachimupa maonero akajeka, akashamisika kuona chiri chitunha chemusikana wavainge vakatarisa. Achitarisa padyo, mubati akamuziva semukadzi wake. Fungidzira kushamisika kwake paakadzokera kumba mwedzi wakatevera kuti azive kuti mudiwa wake akafa musi iwoyo waakaona kuoneka kunotyisa.
Kune zvimwe zveidzi nyaya kubva, CLICK HERE.
Zvakanaka… ndizvozvo. Isu takafukidza yandinofarira inotyisa mataundi ngano kubva kune yega yega makumi mashanu matunhu muUS Wanga uine chaunoda here? Paive nevamwe vaungadai wakasarudza iwe? Tiudze zvaunofunga pasi apa!